laacib » SAGAAL Ciyaartoy Oo Chelsea Ah Oo Lagu Xaaqay Stamford Bridge Iyadoo Kooxda Conte Ay Guuldarro Ku Bilaabatay Difaacashada Horyaalka Premier League
Sagaal ciyaartoy oo Chelsea ah ayaa lagu xaaqay garoonkooda Stamford Bridge ka dib markii ay guuldarro 3-2 ka soo gaartay laacibkii Burnley kulankooda ugu horeeya xilli ciyaareedka. Gary Cahill ayaa bilowgii ciyaarta casaan toos ah laga siiyay, iyadoo Cesc Fabregas uu isna casaan kale qaatay ciyaarta oo 10 daqiiqo ay ka harsan tahay. Inkastoo Blues laga badiyay hadana Alvaro Morata ayaa furtay akoonkiisa goolasha Premier League isagoo dhaliyay goolkii koowaad ee Chelsea.
Chelsea ayaa ciyaarta ku bilaabatay si fiican iyadoo Fabregas iyo Willian ay kubado fiican dhisayeen, laakiin laacibkii difaacaneysa horyaalka ayaa waxaa u soo hooyatay musiibo markii kabtankooda Gary Cahill casaan toos ah loo taagay ka dib qalad uu ku galay Craig Pawson.
Daqiiqadii 20aad laacibkii Burnley ayaa u muuqatay mid kubada shabaqa dhex dhigtay markii karoos uu soo dhigay Brady uu madax ku sii dhigay Tarkowski, iyadoo Voker uu madax shabaqa ku dhex dhigay, laakiin garsooraha ayaa diiday goolkaas madaama uu Tarkowski uu gacanta wajiga uga dhuftay Christensen.
Inkastoo ay Chelsea ku ciyaareysay 10 ciyaartoy hadana waxa ay kubada ka heysteen laacibkii Burnley iyagoo doonayay inay durbadiiba barbareeyaan ciyaarta, laakiin weerarkoodii joogtada ahaa waxaa dhuunta u galay daafaca Tarkowski kaasoo diiday inay natiijo yeelato kubad-heysashada Blues.
Alvaro Morata ayaa bedel lagu soo geliyay ciyaarta oo 30 daqiiqo ka harsan isagoo saftay kulankiisii ugu horeysay ee Premier League, laakiin Chelsea ayaa mar kale u dhawaatay inay shabaqa soo taabato, waxaana mar kale sigay laacibkii Burnely Marcos Alonso.